ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် ခံစားသိမြင်နိုင်ပါစေ ~ Nge Naing
Friday, January 20, 2012 Nge Naing 87 comments
သူအာဏာရစဉ်က ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို နိုင်ငံတော်ကို ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း လုပ်သူလို့ စွပ်စွဲပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ညှဉ်းဆဲခဲ့သူ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ပြန်လွတ်လာသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် တယောက် နိုင်ငံရေးဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရနဲ့သာ ဆိုင်ပြီး တခြားသူတွေအတွက်ဆိုရင် မကောင်းဆိုးဝါး အလုပ်လို့ အခုထိသတ်မှတ်နေပုံရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ အထင်ခံရရင် ပြန်လည်ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်နေလို့လားတော့ ပြောမတတ်ဘူး သတင်းထောက်တွေက ဘာလုပ်ဖို့ အစီစဉ်ရှိလဲလို့ မေးတာကို လောလောဆယ်တော့ ဘာသာရေးလုပ်နေပါတယ် ပြောပြီး တဆက်တည်းမှာ ချက်ချင်းပဲ နိုင်ငံရေးတော့ လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ အဆောတလျှင် ဖြေလိုက်တာကို သတိထားမိပါတယ်။ အမှန်က နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တယ်၊ နိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံရေးအသိအမြင် နိုးကြွားနေမှ ကောင်းမွန်မှန်ကန်ပြီး ပြည်သူထူထုကို အကျိုးပြုတဲ့ အစိုးရကို ရွေးချယ်တင်မြောက်ပြီး ကောင်းတဲ့အစိုးရကို လူထုကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအတွက် နိုင်ငံရေးမှာ တနည်းနည်းနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာ စိမ့်ဝင် ပြန့်နှံ့ဖို့ တကယ်ပဲလိုအပ်နေပါတယ်။ ဦးခင်ညွန့် နိုင်ငံရေးမှာ ပါတာ မပါတာကိုတော့ ကျွန်မ စိတ်မ၀င်စားဘူး သူ့ရဲ့ဘ၀အပြောင်းအလဲကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
အခုတလော ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ စာဖတ်သူတွေထဲက တယောက်ယောက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Links တွေကို မှတ်ချက်ထဲမှာ လာထည့်ပြီး ကြော်ငြာပေးလို့ အချိန်တိုတို ကာလအတွင်း လူတွေ အဆမတန် လာဖတ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှတ်ချက် ရှိတဲ့ပို့စ်က ကျွန်မရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုကို ရေးထားတဲ့ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၆ နှစ်မြောက် အမှတ်တရပို့စ်သာ ဖြစ်ပြီး ၀င်ကြည့်သူ တထောင်ကျော်ပဲ ရှိနေခဲ့ရာကနေ လူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀င်ကြည့်နေကြလို့ တရက်နှစ်ရက်အတွင်း Page Viewers တသောင်းနီးပါး ဖြစ်လာပြီး လူလာအများဆုံး ပို့စ် ၁၀ ခုစု စာရင်းထဲ ချက်ချင်းကို ၀င်သွားပါတယ်။ အရင်က ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စကားပြောသော ဗွီဒီယိုတခုဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ KNU နဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးတဲ့ ဗွီဒီယိုကို ညဘက်မှာ တံခါးခေါက်ပြီး သူ့ကို လာခေါ်သွားခံရတဲ့ အသံတိတ်ဗွီဒီယိုနဲ့အတူ တွဲတင်တဲ့ပို့စ်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ လူတွေတော်တော်လေး လာဖတ်ကြလို့ လူအလာများဆုံး ပို့စ် ၁၀ ခုထဲမှာ ၀င်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုဆိုရင် ဦးခင်ညွန့်ကို အကြောင်းပြုပြီး ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ လူအလာအများဆုံး ၁၀ ခုစာရင်းထဲဝင်သွားတဲ့ပို့စ် နှစ်ခုရှိနေပါပြီ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ချစ်လို့ဖြစ်စေ၊ မုန်းလို့ဖြစ်စေ အခြားအကြောင်းတခုခုကြောင့် ဖြစ်စေ ဦးခင်ညွန့်ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုကို အတော်လေး ရနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်နေသေးတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒီလို စိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မလည်း ပါပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ချစ်လို့လည်းမဟုတ် မုန်းလို့လည်းမဟုတ် လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀အလှည့်အပြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စကားပြောသော ဗွီဒီယိုပို့စ်ကို တင်တုန်းကဆိုရင် လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀တဆစ်ချိုးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ တော်တော်လး သံဝေဂရမိပါတယ်။ ဒီလို သံဝေဂတရားကို ဦးခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ရသင့်ပါတယ်။ သူပေးတဲ့ ဒုက္ခကို ခံစားဖူးသူ ခံစားနေရဆဲ သူတွေရဲ့ ဒုက္ခနဲ့အညီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သူပြန်မခံရပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတော့ သူဒုက္ခပေးလို့ခံရတဲ့ သူတွေရဲ့ ဒုက္ခနဲ့ ညီမျှတဲ့ စိတ်ဒုက္ခကို သူကောင်းကောင်း ခံစားနားလည် သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မ ပို့စ်အသစ် ရေးမအားသေးတဲ့ အချိ်န်မှာ တလက်စတည်း သူ့လက်ထက်က အကြောင်းမဲ့ စွပ်စွဲပြီး ထောင်ချခံရတဲ့သူတယောက်ဆီက အောက်ပါ ပေးစာကို ဒီနေရာက ကူးယူပြီး ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်က လာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့ သူတွေကို ဖေါ်ညွန်းထားတဲ့ ကိုမွန်းအောင်ရဲ့ ဧည့်ဆိုးသီချင်းလေးကို နားထောင်ရင်း တချိန်တည်းမှာ ဦးခင်ညွန့်လည်း ဒီလိုညကြီးမင်းကြီးမှာ တံခါးခေါက်ပြီး လာခေါ်သွားခြင်း ခံရဖူးတာကို အောက်ကဗွီဒီယိုမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို လာခေါ်သွားသူတွေကတော့ သီချင်းထဲကအတိုင်း သူမမြင်ဖူးတဲ့ မျက်နှာစိမ်းလည်းမဟုတ် ဇနီးကိုပါ အတူခေါ်သွားခံရတဲ့အတွက် ချစ်ဇနီးကိုလည်း တမ်းတစရာမလိုလို့ အဲဒီသီချင်းထဲကသူတွေ ခံရတာလောက်
ဇာတ်နာမှာမဟုတ်၊ ဒုက္ခကြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့လည်း သင်္ခန်းစာ ယူဖို့လုံလောက်တဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံကို ရထားပြီးပြီမို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်တယောက် သူဒုက္ခပေးလို့ ခံရသူတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ တွေးမြင်ပြီး ထပ်တူထပ်မျှ ခံစား၊ သိမြင် နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Unwelcome visitor by lawkaanat
ဒီသီချင်းလိပ်စာကို Face book လာထည့်ပေးတဲ့ ကိုဇော်မျိုးလွင်နဲ့ Angel Shaper တို့ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးခင်ညွန့်ကို ညဘက် တံခါးလာခေါက်ပြီး ခေါ်သွားတဲ့ အသံတိတ်ဗွီဒယိုနဲ့ အပေါ်က သီချင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ဧည့်ဆိုးရဲ့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရပြီး အခုထိ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိနေသေးသူတယောက် အကြောင်းနဲ့အတူ အောက်က ပေးစာကို ဆက်ဖတ်ကြပါရန်...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၁)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဟာ တိုင်းပြည်မှာ တာဝန်အရှိဆုံး လူတွေထဲက တစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အာဏာ သိမ်းယူပြီးသည့် အချိန်က စပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ထောက်လှမ်းရေးဌာနရဲ့ အကြီးအကဲ အဖြစ်ရော၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) အနေနဲ့ရော ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ်နဲ့ပါ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလို တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကာလတွေက မှားယွင်းခဲ့တာတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ကျနော် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို သတင်းအမှား အမြောက်အမြားကို အခြေခံပြီး မတရားသဖြင့် နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခြင်းနဲ့ မျှတသော တရားစီရင်ခြင်း မရှိဘဲ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ထားတာကလည်း တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို မတရားသဖြင့် အနှိပ်စက်ခံ၊ အကျဉ်းချခံရလို့ ဘ၀ပျက်သွားတဲ့ မိသားစုတွေ သာမက အခုချိန်အထိ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေသူတွေလည်း အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ဒီအထဲက ကိုသန်းဇော် (ခ) သန့်ဇော် တစ်ယောက်က နမူနာပါ။ သူ့လိုမျိုး ဖြစ်ရပ်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် အနေနဲ့ မှားယွင်းခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံဖို့နဲ့ ကိုသန့်ဇော် လွတ်မြောက်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်နဲ့ အဖွဲ့က မှားယွင်းပြီး ဖမ်းခဲ့တဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးပါတယ် ဆိုပြီး လွှတ်ပေးခဲ့တုန်းကလည်း ကိုသန့်ဇော် မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေကို ဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမှ တောင်းပန်မှုမျိုး မလုပ်ခဲ့သလို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရ မလိုတောင် ပြောခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြန်လွတ်လာသူတွေဟာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဒုက္ခတွေ ဝေခဲ့တယ်။ ဘယ်တာဝန်ရှိသူကမှ လျော်ကြေးပေးတာမျိုး၊ ပြန်လည် ကုစားပေးခဲ့တာမျိုး မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ မှားယွင်းကြောင်း သိတယ်ဆိုရင် အစိုးရတရပ် အနေနဲ့ လူသိရှင်ကြား တောင်းပန် ရမှာပါ။ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ လျော်ကြေးတွေ၊ ပြန်လည် ကုစားမှုတွေ ပေးရမှာပါ။ ဒါ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများရဲ့ ကျင့်ဝတ် ဖြစ်ပါတယ်။
မှားခဲ့တာကို ‘မှားပါတယ်’ လို့ ၀န်ခံ ပြောဆိုခြင်းဟာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အကောင်အထည် ဖော်နေပါတယ် ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ ယုံကြည်ဖို့ အင်မတန် ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုသန့်ဇော်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ အစိုးရရဲ့ တာဝန် ပျက်ကွက်မှုတွေကို မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းစွာ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ပေါ်လွင်နေတာတောင်မှ မတောင်းပန်တဲ့အပြင် အခုချိန်အထိ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားတာဟာ အလွန် ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူ ဖြစ်သလို ကြီးမားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခြင်း မပြုရလို့ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေက ပြဋ္ဌာန်းထားပေမယ့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်နှင့် ဦးသိန်းစိန်တို့ နှိပ်စက်ခြင်းတွေ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေအပေါ် အရေးယူတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ကာကွယ်ပေးထားခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်က နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကို မူဝါဒ ချမှတ်ပြီး ကျူးလွန်နေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအတွက် တာဝန်ရှိပါတယ်။
အခု ကိုသန့်ဇော် ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တဲ့ သူ့အမှုအကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ဘယ်လောက် ရက်စက်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်ကို ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားစေခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် (၂) ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ (၂) says:
January 20, 2012 at 12:38 AM Reply
January 20, 2012 at 12:41 AM Reply
စစ်သားတွေဟာ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ငါတကောကော အမှားတွေလုပ်၊ တိုင်းပြည်ကို စစ်တပ်လို အုပ်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ တကယ်တော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ချည်းပဲ ဆိုရင် စစ်တပ်က ဒီလောက် ဖိနှိပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ စစ်သားစစ်စစ် မဟုတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လို ပါးပါးနပ်နပ် နဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ သူကြောင့် သာ စစ်တပ် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တာပါ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဟာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဟာ တပ်ထဲမှာ နေရာပေးခြင်း ခံခဲ့ရတာပါ။
(ခင်ညွန့် ဘယ်သူလဲ စုစည်း တင်ပြချက်) - မြင့်မိုဦး
မြန်မာပြည်ကို ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားစေခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် (၂) ဟာ ခင်ညွန့် ပါ (၂) says:
January 20, 2012 at 12:45 AM Reply
January 20, 2012 at 1:00 AM Reply
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၁) ပို့စ် က
မြန်မာတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ် ပါ
ဒီ ပို့စ် ကို တင်ပေးလို့ အန်တီငယ်ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
January 20, 2012 at 2:06 AM Reply
"ဦးခင်ညွန့် ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ" .. ဟုတ်လား ....
January 20, 2012 at 2:09 AM Reply
January 20, 2012 at 2:11 AM Reply
January 20, 2012 at 2:14 AM Reply
January 20, 2012 at 2:17 AM Reply
January 20, 2012 at 2:19 AM Reply
ဒါပေမယ့် ဦးခင်ညွန့်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ပုံနှိပ်စက်သမားတွေ ပြောသလိုပြောရရင် "မှင်အနက်ဘဲ... ဘယ်လိုမှင်နဲ့ မှ သူ့ ကို အရောင်ပြောင်းလို့ မရနိုင်ဘူး"...
ဦးခင်ညွန့်ဟာ လူမကြမ်းဘဲ စိတ်ဓါတ်ကြမ်းတဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ...
January 20, 2012 at 2:24 AM Reply
(ဘလော့ရှင် မငယ်နိုင်၏ မှတ်ချက်)
January 20, 2012 at 2:36 AM Reply
Observer ၏ မှတ်ချက်)
January 20, 2012 at 2:42 AM Reply
January 20, 2012 at 2:43 AM Reply
မြွေပွေး ခင်ညွန့် ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာ အရပ်သားအရေခြုံ စစ်အုပ်စုရဲ့ အာဏာကို ထိပါးနိုင်သူတွေကို ကိုက်ခိုင်းမလို့ ဖြစ်နိုင်တယ် says:
January 20, 2012 at 2:48 AM Reply
January 20, 2012 at 2:54 AM Reply
ခင်ညွန့်ရဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက မတရား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်တာကို မခံခဲ့ရဘူးတဲ့ လူတွေကတော့ ခံခဲ့ရတဲ့ အမြင်ကို ဘယ်သိမလဲဗျ။
( January 20, 2012 8:13 AM
January 20, 2012 8:18 AM )
အမျိုးသမီးဘလော့မှာ ညစ်ညမ်းစာတွေ လာတင်သွားတာ ဘယ်က အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေကဝ လဲကွ
ဒီဘလော့မှာ ဘုန်းဘုန်းတွေရော၊ ကျောင်းသူလေးတွေရော လာဖတ်နေတာကို သိသိကြီးနဲ့ ယုတ်မာလှချည်လားကွ
ဒို့လူမျိုးထဲမှာ မင်းလို ပေါက်လွတ်ပဲစား အယုတ်တမာကောင်တွေ ရှိနေတာ လူမျိုးနဲ့ချီပြီး အရှက်ရစေတယ်ကွ
မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဆန်ကုန်မြေလေး မျိုးဖျက်ကောင်ရေ
January 20, 2012 at 2:56 PM Reply
ခင်ညွန့်၊ ဦး ဟာ စစ်သားစစ်စစ်ပါ။ ရှေ့တန်းလဲ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ပစ်ကြခတ်ကြ ကြားထဲလဲ ခဏခဏ ရောက်ပါတယ်။ သူပုန်တွေနဲ့ တိုက်တဲ့အထဲ ငယ်ရွယ်စဉ်က ပါခဲ့ပါတယ်။
ပညာတတ်ပါ။ စစ်တက္ကသိုလ်ထွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပါ။ ဒါတွေ ဘယ်ကသိလဲတော့ လာမမေးပါနဲ့ မပြောနိုင်ပါ။
ဗိုလ်သင်တန်းနဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ စစ်တက္ကသိုလ်က ဆယ်တန်းအောင်တာနဲ့ အဲဒီမျာ ၄ နှစ်တက်ပြီး ဗိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘွဲ့တစ်ခုခု (ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သိပ္ပံ၊ ဝိဇ္ဇာ) ရပါတယ်။ ဗိုလ်သင်တန်းကတော့ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ ကျောင်းဆင်းတွေ တက်ကြတာပါ။ အရပ်သားတက္ကသိုလ်မှာ ဘွဲ့ရမှ ဗိုလ်သင်တန်း တက်ရတာပါ။
စစ်တက္ကသိုလ်ထွက်နဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်း အများအားဖြင့် ဘာကွာလဲဆိုတော့ စစ်တက္ကသိုလ်က ၄ နှစ်တိတိ ပုံစံသွင်းခံရပြီး ဗိုလ်သင်တန်းက တစ်နှစ်ပြည့်အောင်တောင် မတက်ရတဲ့အတွက် စစ်တက္ကသိုလ်ထွက်က ပိုပြီး ငါတကောကောပါတယ်၊ ခေါင်းမာပါတယ်၊ ငါမှသာ တိုင်းပြည်ကို ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းထက် ပိုချစ်တာလို့လဲ ပြောတတ်ပါတယ်၊ အစ်ကိုကြီး၊ ညီလေးစိတ်ဓာတ် ပိုများပြီး စီနီယာကို ပိုကြောက်တတ်သလို ဂျူနီယာကို ပိုဖိနှိပ်တတ်ပါတယ်။ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းက solf-skill ပိုမြင့်သလို၊ ဉာဏ်လဲ ပိုသုံးတတ်ပါတယ်၊
ငြိမ်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းနဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်ထွက် ဘယ်သူ ပိုအသုံးကျမလဲ စဉ်းစားကြပါကုန်။
January 20, 2012 at 4:35 PM Reply
အပေါ်မှာ Anonymous အနေနဲ့ ညစ်ညမ်းဝတ္ထု တင်သွားတာ ရုရှနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့က စစ်ဗိုလ်တဦးပါ..
ရုရှက စစ်ဗိုလ်တွေက နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပညာတော်သင်တွေ ဆိုလို့ အထင်မကြီးကြနဲ့ဗျို့..
ရုရှက စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို မလိုက်နာတဲ့၊ သိက္ခာမရှိတဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ယုတ်ညံ့တဲ့ ကောင်တွေ မနည်းဘူးဗျ..
လူပေါ့ လူသွမ်း လူ့ပေါက်ပန်း တွေပေါ့ဗျာ..
တကယ်ကို စစ်ခွေးလို့ အခေါ်ခံထိုက်တဲ့ အဆင့်အတန်း လုံးဝ မရှိတဲ့ ကောင်တွေပါ..
ဒီမိုကရေစီဘက်သားတွေက ရန်-ငါ မပြတ်ဘူး၊ နည်းနည်း အသာစီး ရလာရင် ဆက်ပြီး အနိုင်ယူဖို့၊ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး says:
စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေက ရန်သူဘက် (ရန်) နဲ့ ကိုယ့်ဘက် (ငါ) ကို ပိုင်းခြားတဲ့ စည်းတကြောင်း (ရန်-ငါ စည်း) ကို ထင်ထင်ရှားရှား ဆွဲထားပြီး ရန်-ငါ စည်း ရဲ့ တခြားဘက်ခြမ်းက လူအားလုံးကို ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရန်သူလို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်ဆံတယ်။ စစ်အုပ်စုက ရန်-ငါ ပြတ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့တွေက ပြတ်ပြတ်သားသား အသာစီးရပြီး အပေါ်စီးက နေပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်သားတွေက ရန်-ငါ စည်း ရဲ့ တခြားဘက်ခြမ်းက လူအားလုံးကို ရန်သူအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား မဆက်ဆံဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ရန်-ငါ စည်း ရဲ့ တခြားဘက်ခြမ်းက လူတွေကို မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တွေကို ကျင့်သုံးတယ်။ နည်းနည်း အသာစီး ရလာရင် ဆက်ပြီး အနိုင်ယူဖို့၊ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ ဆိုတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ "အားလုံး အတူတကွ လက်တွဲ နေထိုင်ရေး" ကို ပို ဦးစားပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ရန်-ငါ မပြတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ထင်တိုင်းကြဲတာကို ကျွန်တော်တို့ ခဏခဏ ခါးစည်း ခံခဲ့ကြရတယ်။
တခါတလေ တော့လည်း ကိုယ်လည်း ရန်-ငါ ပြတ်သူ ဖြစ်ချင်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ "ငါဟာ လူ၊ ငါဟာ တိရစ္ဆာန် မဟုတ်ဘူး" လို့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်မိရင် ရန်-ငါ မပြတ်နိုင်သူ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ "လူ အဖြစ်ကို အဆုံးရှုံးခံပြီးမှ ရလာမဲ့ အောင်နိုင်မှုဟာ ထိုက်တန်ရဲ့လား၊ တကယ်ကော လိုချင်ရဲ့လား" လို့ ပြန် စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
မြစ်ဆုံ ကိစ္စ မှာရော၊ အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စ မှာပါ စစ်အုပ်စုက သေသေချာချာ အစီအစဉ် ဆွဲပြီး အပြလှမယ့် ဇာတ်သိမ်းခန်းတွေကို ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူး ပြသတာပါ says:
January 20, 2012 at 5:49 PM Reply
မြစ်ဆုံ ကိစ္စ မှာရော၊ အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စ မှာပါ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သေသေချာချာ ပလန် (အစီအစဉ်) ဆွဲပြီး ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူး ပြသတာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးကို ကျေညက်တဲ့၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်တဲ့ အစ်ကိုတချို့က ယူဆပါတယ်။ အပြလှမယ့် ဇာတ်သိမ်းခန်းတွေက ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်း ရိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေ ဆိုတာကို ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ အစ်ကိုတွေနဲ့ အမြင်တူပါတယ်။
January 20, 2012 at 5:52 PM Reply
ဦးခင်ညွန့်လို ပြည်သူများစွာရဲ့ ဘဝတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့၊ အသက် ဆုံးစေခဲ့တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးရင် လူထုက လက်ခံမှာ မဟုတ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့နဲ့ တွဲပြီး လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ says:
January 20, 2012 at 5:59 PM Reply
January 21, 2012 at 9:56 AM Reply
January 21, 2012 at 5:58 PM Reply
၇ှိမှာမလို့ အမလို့ဘဲခေါလိုက်မယ်နော်.။ကျန်တော် အမရဲ့ဆိုက်ကို ဒီညမှဝင်ဖတ်ဖြစ်တာပါ..ကျန်တော်ကလည်း နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးတွေ စိတ်ဝင်စားပါတယ်.အမတင်တဲ့ပို့လေးတွေ ကကောင်းပါတယ်.။ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အသုံးအနှုံးလေးတွေပေါ့..အဲ့ဒါမျိုးကြတော့.စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်.။ကွန်မန့်ဝင်ပေးတဲ့သူတွေကလည်း အများကြီးလေ..နားလည်ပါတယ်.။ဥပမာ..အဖွဲစည်းတစ်ခုပေါ့..အသင်းအဖွဲ့လေးတစ်ခုပေါ့.. အဲ့လိုမျိုးထဲမှာတောင်.. လူတစ်ယောက် စိတ်တစ်မျိုး အကျင့်တစ်မျိုးစီ၇ှိကြပါတယ်... အဲ့ါတော့ဟုတ်တယ်မလားအမ. အဲ့လိုပါဘဲ.. အမတို့တွေစစ်တပ်ကို တော်တော်မုန်းနေကြမယ်ဆိုရင်လညး မမှားပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ကျန်တော်တို့ထဲမှာ ကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ၇ှိပါသေးတယ် အမ၇ယ်။ ဒီအမေတစ်ယောက်ထဲက နေမွေးဖွားလာကြတာမှမဟုတ်တာနော်အမ..။ ကျန်တော်ကလည်း. ငယ်ငယ်ကထည်းက မဟုတ်မခံတဲ့လူမျိုးပါ.. ကိုလည်းသူများကိုမစော်ကားဘူး.. မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုပါတော့.. ကျန်တော့်လုပ်၇င်လည်း မကြိုက်ဘူးပေါအမ၇ယ်..။ ကျန်တော်တို့တပ်မတော်ထဲမှာ ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတွေ၇ှိသလို.. စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ သူတွေဘုရားတရားသမားတွေ.လည်း ၇ှိပါတယ်.. ဒါလေးကိုတော့ နားလည်ပေးပါ. ကျန်တော် ဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကို.. မှန်ပါတယ်..လူဆိုတာတော့ နားကြီးတက်ကြမှာဘဲလေ.. ဒါတွေကလည်း အမပြောသလို ရှေးကအကုသိုလ်ကံတွေ ပါလာ လို့ဖြစ်တာလို့ မှတ်လို့၇တယ်မလား.။ ထောင်ကျတာ.. ဖမ်းစီးချူပ်နှောင်ခံ၇တာတွေ.. အသတ်ခံ၇တာတွေဆိုတာ ကံကံရဲ့အကျိုးဘဲမလားအမ.။ ကျန်တော်ကတော့ အားလုံးကိုပြေလည်စေချင်ပါတယ်..။ တစ်ယောက်မကောင်းရင်တော့ အားလုံးကိုသိမ်းကြုံးပြီး အပြောခံ၇မှာပါလား ဆိုတာကိုလည်း သိပါတယ်..။ ဒါပေမယ်.. ကျန်တော်ပြောတဲ့သူတွေလည်း ၇ှိပါသေးတယ်ဆိုတာကို အမတို့သိစေချင်လို့ပါ.။ ဘယ်လိုစိတ်မှလည်းမထားပါဘူး..။ ကျန်တော်ရပ်တည်နေတာကလည်း. လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ ဘ၀ကြီးအတွက်ပါဘဲအမ.။ ဒါမျိုးတွေ နောက်ထပ်မကြုံ၇အောင်ဘဲ လုပ်ဖို့အမြဲ အားထုတ်ပါတယ်.။ အမပြောသလိုပေါ့နော်.. ကံကံ၏အကျိုးဆိုတာလေ.။ ကျန်တော့်စကားထဲမှာ အမှားပါသွားရင်လည်း နားလည်ပေးပါ.။ ကျန်တော်တို့မှာအထက်က လုပ်ခိုင်းတဲ့အမိန့်ဆိုတာဘဲ၇ှိပါတယ်.။ အလုပ်ကို တာဝန်ကျေချင်တဲ့စိတ်ဘဲ ၇ှိပါတယ်..။ နောက်ပီးတော့ ဘယ်သူကိုမှ နစ်နာစေသာစေဆိုတာမျိုး ကျန်တော့်မှာမ၇ှိပါဘူး.။ မိမိစိတ်သာလျှင် ဘုရားအသိဆုံးပါအမ.။ ဒါကြောင့်မေတ္တာရပ်ခံခြင်တာကတော့.. သိမ်းကြုံးပီးပြောတာမျိုးပေါ့ အမ၇ယ်.. ဒါကိုနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်.။ ဒါကအမနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့သဘောပါ.. ကျန်တော့်ခံစားချက်ကိုပြောပြတာပါအမ.။ စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိလိုလေ.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမကိုလည်း.. အမ၇ဲ့စာဖတ်သတ်တစ်ဦး။)))))
ဒီမှတ်ချက်ကတော့ အပေါ်က အမရဲ့ စာဖတ်သူတဦးဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ တပ်မတော်သား တဦး ဖြစ်သူ Anonymous (January 21, 2012 9:56 AM) ရဲ့ မှတ်ချက်ပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ မှတ်ချက်က စကားလုံးတခုနဲ့တခု ခြားရင်Space bar မခံတော့ စာတကြောင်းပဲ ပေါ်ပြီး Comment ရေးတဲ့ နေရာနဲ့ Layout မကိုက်ညီတော့ ကျန်တာတွေကမပေါ် ဘဲဖြစ်နေလို့ မေးလ်ထဲမှာ ၀င်နေတာကို ကော်ပီပြန်ကူး Space bare ခြားပေးပြီး ပြန်ထည့်ထားပေးပါတယ်။ နောက်တခါရေးရင် Space bar ခြားပေးဖို့နဲ့ တချောင်းငင်တို့ နသတ်တို့နဲ့ ရေးတဲ့ အောက်ကမြစ်ကို Shift + Y နဲ့ ရေးပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
တပ်မတော်သားတွေထဲမှာလည်း ကောင်းတဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ မကောင်းတဲ့သူတွေဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာကျော်အောင် မကောင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကို Anonymous တို့လို မဟုတ်မခံတတ်သူ ဆိုသူတွေ မသိခြင်းဟာ ဖုံးကွယ်ထားခြင်း ခံရလို့သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Anonymous ကသာ မသိပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို တကမ္ဘာာလုံးက သိပါတယ်။ ဖြစ်နေတာ အားလုံးဟာ ကံ ကံ၏ အကျိုါ်ကြောင့် ဆိုတာကိုလည်း ဘာမှ ငြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ တခုရှိတာက အရင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာလည်း ပြုခံရသအတွက်သာ မှန်ပြီး ပြုလုပ်သူကတော့ နောက်ထပ်အသစ် ပြန်ခံရဖို့အတွက် အခုမှ စတင်လုပ်သူဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အတိတ်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကံဆိုပေမဲ့ ကံသေကံမ ပြောလို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ပစ္စုပ္ပန်ကံကို အားကောင်းအောင် ကြိုးစားရင် အတိတ်က ပါလာတဲ့ကံကို အားလျှော့သွားအာင် လုပ်လို့ရနိုင်လို့ပါပဲ။
အစ်မပို့စ်တွေက ကိုယ်တွေ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေပဲ များပြီး ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ရင်လည်း အခုလို အိတ်ဖွင့်ပေးစာလို အများသိသင့်တယ် မကျိုးရှိမယ်ထင်တာကို ပြန်ဖေါ်ပြတာတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူ့မကောင်းကြောင်းမှ လုပ်ကြံပြောဆိုထားတာ မရှိပါဘူး။ အာဏာရှင်စနစ် မကောင်းမှု Fact သက်သက်ကိုပဲ ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီပို့စ်က အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြောတယ် ဆိုရလောက်အောင် တခြားတပ်မတော်သားတွေအကြောင်း ဘာမှမရေးထားဘူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ထောက်လှန်းရေးအဖွဲ့ အကြောင်းပဲ ပြောထားတော့ Anonymous ပြောထားတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ တယောက်မကောင်းတာနဲ့ အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြောတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ဒီပို့စ်ထဲမှာ မတွေ့ရတဲ့အတွက် ဘယ်အချက်အပေါ်မှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဆိုတာ သေသေချာချာလေး န်ြဆွေးနွေးပေးစေချင်တယ်။ ဒီပို့စ်မဟုတ်ဘူး တခြားပို့စ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီပို့စ်အောက်မှာ သွားဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
January 23, 2012 at 9:29 AM Reply
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၁) says:
January 23, 2012 at 6:25 PM Reply
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၂) says:
January 23, 2012 at 6:26 PM Reply
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၃) says:
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၄) says:
January 23, 2012 at 6:28 PM Reply
မြင်တွေ့ ဖတ်ရှုရတဲ့ ပုံတွေဟာ ---
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၅) says:
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၆) says:
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၇) says:
January 23, 2012 at 6:30 PM Reply
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၈) says:
အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ "ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့" အပိုင်း (၂) ၊ (၃) ၊ (၄) ၊ (၆) Spam ထဲကို ရောက်နေတယ် ထင်တယ်..
January 24, 2012 at 9:52 PM Reply
January 25, 2012 at 12:25 AM Reply
January 25, 2012 at 1:42 AM Reply
ခင်ညွန့်ကုို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက ဘာကြောင့် လစာ ဒေါ်လာ ငါးထောင် ပေးသလဲ - ၁ says:
January 25, 2012 at 7:07 AM Reply
ခင်ညွန့်ကုို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက ဘာကြောင့် လစာ ဒေါ်လာ ငါးထောင် ပေးသလဲ - ၂ says:
January 25, 2012 at 7:08 AM Reply
January 25, 2012 at 7:34 AM Reply
January 26, 2012 at 11:01 PM Reply
ရွှေသံလွင် ဘိုးဘွားရိပ်သာဟာ ၈၈ရပ်ကွက်၊ ကွမ်အမ်သားမင်းသားလမ်း၊ မြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့တာပါ။ ယခု အခါ အဖိုး၂၀ယောက်၊ အဖွား ၇၀ယောက်၊ ၀န်ထမ်း ၂၂ယောက်နဲ့ လည်ပတ်နေပါတယ်။ အဖိုးအဖွားတိုင်းကို တစ်နှစ်ကို အ၀တ်၂စုံစီ၊ တစ်ဦးချင်းအတွက် ကုတင်၊မွေ့ယာ၊စောင်၊ခေါင်းအုံး၊ ဘီဒို၊ ဖိနပ်၊ ပန်းကန်း၊ ဇွန်း၊ ရေခွက် အစရှိတဲ့ ကိုယ်စီ ပေးထားပါတယ်။
ရိပ်သာဝင်းအတွင်းမှာ အဆောင် ၇ဆောင်ရှိပါတယ်။ အဖိုးတွေအတွက် ၁ဆောင်၊ အဖွားတွေအတွက် ၃ဆောင် ပါဝင်ပါတယ်။ ဘိုးဘွားတွေအတွက် ဘုရားဝတ်ပြုခန်း၊ အပန်းဖြေ တီဗွီကြည့်ခန်းများလည်း ထားရှိပေးထားပါတယ်။ ရာသီအလိုက် ပွဲတော်တွေမှာ ဘိုးဘွားတွေကို အားကစားပွဲ၊ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးပါတယ်။
January 27, 2012 at 3:46 AM Reply
အဖိုးအဖွားတွေကို ကျွန်မတို့ ကူညီကြပါစို့လားရှင် says:
January 27, 2012 at 7:45 AM Reply
အဖိုး အဖွားတွေအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေလည်း ထားရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နာတာရှည် အဖိုးအဖွားတွေအတွက် သီးသန့်ထားရှိဘို့ အဆောင်တစ်ခု လိုအပ်နေပါသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်ရှင်။ စေတနာရှင် အလှူရှင်များရဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှုတွေ အရမ်းကို လိုအပ်နေပါ တယ်။ ယခုထိ အလှူရှင်စောင့်မျှော်နေဆဲလို့ သိရ ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မနားထဲမှာတော့ …
” အလှူရှင်တွေလာရင် အဖွားတို့ အရမ်းပျော် ကြတယ် သမီးရယ် ” ဆိုတဲ့ စကားသံလေးဘဲ ကြားယောင်နေမိပါတယ်။
ဂရုဏာသက်စရာ ခိုကိုးရာမဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုလေးတွေ ကျွန်မတို့ပေးကြပါစို့လားရှင်။ တစ်ယောက် တစ်လက်နဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြပါစို့လားရှင်။
January 27, 2012 at 8:10 AM Reply
January 27, 2012 at 9:32 AM Reply
January 27, 2012 at 9:35 AM Reply
ခင်ရွှေ အဲ့သလောက် စေတနာမကောင်းသလို.. အဲ့သလောက် မချမ်းသာလောက်ပါဘူး...
Ei Khine - ပစ္စည်းတွေပါ အသိမ်းခံရမှာစိုးလို့ ခင်ရွှေကို အပ်ခဲ့တာ..
January 27, 2012 at 9:37 AM Reply
Mg Bhakhat - ခင်ရွှေ စီးပွားရေးလုပ်ပုိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးမျိုးရအောင် ခင်ညွှန့်က အခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘယ်လောက် ကူညီ မစခဲ့သလဲဆုိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
January 27, 2012 at 9:42 AM Reply
Kophyo Ko Phyo - အကျဉ်းထောင်တွင်း ဆရာတော်ကြီးများနှင့် သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးရပုံ (ဦးခင်ညွှန့် သာဓုခေါ်စေရန်..)
သေချာတာကတော့ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဦးနှောက်ဖောက်စားမှာပါပဲ ....
Shwe Yi Linn - ငါသာဆို မရှိဆင်းရဲသားတွေက်ိုပဲလှုလိုက်မယ်..
January 27, 2012 at 1:36 PM Reply
January 27, 2012 at 9:40 PM Reply
January 28, 2012 at 7:16 AM Reply
January 28, 2012 at 7:24 AM Reply
28 Jan 12, 04:57 AM
မောင်ငယ်လေး: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မငယ်ကျန်းမာပါစေ။စာအရေးအသားအမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။
28 Jan 12, 04:54 AM
သားထူး: Spam ထဲ ရောက်နေတာလား.. အန်တီ..
28 Jan 12, 04:53 AM
သားထူး: အန်တီငယ် ... ကွန်မန့်မှာ " ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၁)" ပဲ ရှိတယ်.. ကျန်တဲ့ (၂) + ..... တွေက Comment Moderation လုပ်ထားလို့ မပေါ်တာလား
27 Jan 12, 04:58 PM
Nge Naing: အောက်က ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ ကျွန်မက ဒီမှာ ချေးပြီး ပညာသင်ထားတဲ့ အကြွးတွေကို အခုမှစပြီး ပြန်ဆပ်နေရတုန်းဆိုတော့ အခုချက်ချင်း ပြန်လာစေချင်ရင် အဲဒီအကြွေးတွေကို ရှင်တို့ ပြန်ဆပ်ပေးကြပါ။ ဟုတ်ပြီလား
27 Jan 12, 04:45 PM
Nge Naing: MN - ပြန်လာချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘဲ အကြောက်တရားတွေ၊ အဂတိတွေ၊ ဒုစရိုက်တွေ ကင်းပြီး ထမင်းတလုပ်ကို ၀အောင် ရှာစားနိုင်မယ်ဆိုရင် ပြန်လာမှာပါ။
27 Jan 12, 04:44 PM
Nge Naing: မသိရင်တောင်မှ သူ့အရိပ်ကိုခိုဖူးရင် သူ့ကျေးဇူးကို သိတတ်တဲ့အနေနဲ့ မိမိမှီတင်းနေထိုင်တဲ့ နေရာရဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို သိအောင်လုပ်ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ မြင်တယ်။
27 Jan 12, 04:43 PM
Nge Naing: မောင်ငယ်လေး အစ်မက အော်စီမှာ နေတာတင်မကဘူး ဒီနိုင်ငံက ပညာရေးကို အခြေခံအဆင့်က သင်ကြားခဲ့ရတော့ ဒီကအကြောင်းကို
January 28, 2012 at 7:25 AM Reply
ausi: ၀ိုင်းဝန်း လုပ်သင့်ပြီထင်ပါတယ် ကီးဘုတ်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေရုံနဲ့တော့ ပြောင်းလဲးပါ့မလား တိုင်းပြည်ချစ်ရင် ပြန်လာခဲ့ပါဗျာ နိုင်ငံခြားမှာဘဲ ငြိမ့်မနေပါတဲ့
26 Jan 12, 04:15 PM
ausi: မငယ်နိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ သြစီကို ရောက်သွား တာတော့ဟုတ်ပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မလာတော့ဘူးလား ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက်ပွဲဝင်ပါလား။ အစိုးရကလဲ ပြန်ဖွင့်ပေးထားတာဘဲ ဒီမိုကရေစီရေးအးတွက်သ့
26 Jan 12, 02:31 PM
Abg Cik: Jom Pi Holiday..hehe
26 Jan 12, 03:31 AM
Nge Naing: မင်္ဂလာ ရှိသော သြစကြေးလျားနေ့ပါ။ လာလည်သူအားလုံး သြစကြေးလျားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အခု အပေါ်တင်ထားတဲ့ ဒီပို့စ် [link] လေးကို ဖတ်သွားစေချင်တယ်။
Nge Naing: ကိုသန်းအောင် မချိုလွင် မောင်ငယ်လေး လာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖတ်စေချင်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ Links တွေ မျှဝေချင်ရင် C-Box မှာ ထည့်ပေးခဲ့လို့ ရတယ်။ မချိုလွင် [email] ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
25 Jan 12, 11:56 PM
25 Jan 12, 11:52 PM
25 Jan 12, 02:17 PM
မချိုလွင်: နောက်မှအမကိုဖုန်းဆက်ပြောပြမယ်နော် အမကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
25 Jan 12, 02:16 PM
မချိုလွင်: အမငယ်ရေ ကျမက strathfield မှာနေတာ ကျမပြောတဲ့သူကဘလော့တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးပို့စ်တပိုဒ်တောင်ကောင်းကောင်းရေးတတ်တာမဟုတ်ဘဲကဗျာတိုစတွေရေးပြီးလိုက်နှောက်ယှက်နေတာ သူနှောင့်ယှက်လို့ကျမတောင်ဘလော့ပိတ်လိုက်ရတယ် စ
(January 27, 2012 1:36 PM + January 27, 2012 1:37 PM)
January 29, 2012 at 10:20 AM Reply
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွပ်မြောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအထဲတွင် -၈၈- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်- ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့လွပ်မြောက်လာသည်။ ထို့ ကြောင့် ပြည်သူတွေ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ကြရသည်။ ယင်းအထဲတွင် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပါ လွပ်မြောက်လာသည်။ သူလွပ်မြောက်လာသည်နှင့် လူမှုရေးဘဲ လုပ်တော့မည် ။ တရားသဘောနားလည်သွားပြီဟု ပြောသံတွေ ကြားရသည်။ သူ့ စကားအတိုင်းဆိုလျင် သူကား တကယ့် လူကောင်းတယောက် ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ရသည်။
ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇေယျသာမိတို့ နှစ်ဦးကို ကျောက်တော်မြို့ သို့ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သိရသည်။ လမ်းခုလတ် တောစပ်နေရာ အရောက်တွင် သူတို့ အား မြေတူးခိုင်းစေသည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းသို့ တူးခိုင်းခြင်းမှာ သူတို့ ကို မြုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ၏ တပည့် ထောက်လှမ်းရေးများသည် ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်း ဦးဇေယျသာမိ တို့ နှစ်ဦးကို ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ပြီး သူတို့တူးထားသော မြေကျင်းတွင် မြုပ်နှံထားလိုက်သည်။
လူသတ်လိုင်စင် ရထားသော ထောက်လှမ်းရေးတို့ သည် ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်း ဦးဇေယျသာမိ တို့ နှစ်ဦးအား ဤသို့ရက်စက်စွာ သတ်ခဲ့ပြီးနောက် အလောင်းဖျောက်လိုက်သည်ကို RFA မှ ကျနော် အင်တာဗျူး ပြောဆိုခဲ့ သည်။ ပြီးတော့ ကျနော် ရေးသား ထုတ်ဝေဖြန့် ချီခဲ့သော "ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရမှု အဖြစ်အပျက်များ" စာအုပ်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဤဖြစ်စဉ်တခုလုံးမှာ ပါဝင်ပတ်သူများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါက မည်သူက ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်သည်ကို သိသာနိုင်သည်။
January 29, 2012 at 10:35 AM Reply
အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါမည်ဟု စိတ်ထဲမှာ ကူး၍ ယခုဖြစ်စဉ်ကို ကြေအေးနိုင်စရာ တခု ရှိပါသည်။ ယင်းမှာ ရက်စက်စွာသတ်ပြီး ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇေယျသာမိ အလောင်းကို မိသားစုအား သို့မဟုတ် နယ်မြေခံ ဒေသက လူများအား ပြန်ပေးပါက လက်ခံနိုင်ပါသေးသည်။ ခုတော့ သူတို့ ကို သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းကို ပြန်မပေး။ မည်သည့်နေရာမှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည်ကို ဒေသခံတို့ အား မပြောပြ။ မိသားစုအား အကြောင်းမကြား။ အကယ်၍ ဗုဒ္ဒဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာအရ သရဏဂုံတင်ကာ မြေမြုပ်သဂြိုလ်ခဲ့ သောနေရာ၌ အမျအတန်းဝေခွင့်ကို ရရှိသည်ဟုဆိုက ဇနီး နှင့် သားသမီးတို့ကျန်ရစ်သူ မြေးမြစ်တွေက ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါသေးသည်။ ယင်းသို့ ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ခင်ညွန့် က တခုခု လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
January 30, 2012 at 4:50 AM Reply
January 30, 2012 at 4:56 AM Reply
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၃) said...
ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်မှာ ငွေသားပေါင်းများစွာနဲ့ ကိုယ်တိုင်က ဇိမ်အပြည့်ခံပြီး ပြည်သူကို သမ၀ါယမ စနစ်နဲ့
January 30, 2012 at 4:58 AM Reply
့ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဗိုလ်ခင်ညွန့် မှာ ယခုအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထောင်ထဲသို့ပြန်လည်သွားမှ ကျနော်တို့ကြေအေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ကို တရားဥပဒေမရှိဘဲ သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက လက်ပိုက်ကြည့်နေသည်ဆိုလျှင် နောင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှုများ မပေါ်ပေါက်နိုင်ဟု မည်သူကမှ
ဒေါ်စု နဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရတဲ့ ပြည်ဖျက်တရားခံ ခင်ညွန့် ကို မမ (Hot News) က မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပါ says:
January 30, 2012 at 8:59 AM Reply
မငယ်နိုင် ရေးထားတဲ့((ခင်ညွန့် ခံစား သိမြင်နိုင်ပါစေ)) ရော၊ post အောက်က comments တွေ၊ စာညွန့်တွေ ရော မြန်မာပြည်သူ အားလုံး သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေပါ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထားဝယ်လူထုက အားတက်သရော ကြိုဆိုပုံကို "ဓားဝယ်သား ဂူလောင်း အမေစုကို ရှစ်ဟယ်" ("ထားဝယ်သား အကုန်လုံး အမေစုကို ချစ်တယ်") post ( http://nge-naing.blogspot.com/2012/01/blog-post_30.html ) မှာ မငယ်နိုင် တင်ပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ မြင်ရတာ အရမ်း ဝမ်းသာအားရ ပီတိဖြာမိပါတယ်။ ဒီပုံတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တင်ပေးတဲ့ မငယ်နိုင် အပါအဝင် ဘလော့ဂါတွေ၊ FB က မိတ်ဆွေတွေကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ (၂၉-၁-၁၂) Internet မှာ တက်လာတဲ့ ၂၉-၁-၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထားဝယ်ခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရင်း Hot News Journal က ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်သတိရတယ်။
February 2, 2012 at 9:32 AM Reply
2 Feb 12, 08:17 AM
၅ (ည): ရေကြည်အိုင်က ပြန်မထွက်နိုင်ဘဲ အသက်ဆုံးသွားတဲ့ လူတွေ၊ ကျိုးကန်းပီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ လူတွေ၊ ရူးပီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ လူတွေ (သောင်းပေါင်းများစွာ) ရဲ့ အဖြစ် ကို မြင်ရ၊ ကြားရတဲ့ ပြည်သူ သန်း ၆၀ ကျော်က ဘယ်လို ဖြစ်သွားကြသလဲ
2 Feb 12, 08:14 AM
၅ (ည): အဲဒီလို ရေကြည်အိုင်ကို မရောက်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ သန်း ၆၀ ကျော် ကိုလဲ ခင်ညွန့်က လူညွန့်တုံးအောင် လုပ်ပစ်လိုက်တာ
၅ (ည): သောင်းဂဏန်း ဆိုတော့ မြန်မာပြည်က လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်နဲ့ စာရင် သိပ်မများပါဘူးလို့ အရူးစကား လာပြောဖို့ မကြိုးစားနဲ့
2 Feb 12, 08:13 AM
၅ (ည): အဲဒီလို သေသွား၊ ကျိုးကန်းသွား၊ ရူးသွားတဲ့ လူတွေကိုက မရေတွက်နိုင်ဘူးနော် သောင်းဂဏန်း ပဲ ထားပါ
2 Feb 12, 08:08 AM
၅ (ည): အဲဒါ မင်းပထွေး ခင်ညွှန့် ရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လုပ်ဆောင်ချက်တွေလေ
2 Feb 12, 08:06 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့် ကြောင့် သေသွားသူတွေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချွတ်ယွင်းသွားသူတွေ၊ ရူးသွားသူတွေ ရိုက်သတ်လို့တောင် မကုန်ဘူး
2 Feb 12, 08:02 AM
၅ (ည): ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးစခန်းက ပြန်ထွက်လာတဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ မှန်သမျှ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ တစုံတခု မချွတ်ယွင်းဘဲ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု မရှိဘဲ ပြန်ထွက်သွားတာမျိုး မရှိအောင် ကြပ်မတ်တဲ့ နေရာမှာ တော်တာလား
2 Feb 12, 07:59 AM
၅ (ည): ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်နည်း မျိုးစုံနဲ့ မတရားအဖမ်းခံရသူက မလုပ်ခဲ့တဲ့၊ ဘာမှ မသိတဲ့ အပြစ်တွေကို အတင်း ဝန်ခံခိုင်းပီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ နေရာမှာ တော်တာလား
၅ (ည): ခင်ညွန့် တော်တယ် ဆိုတာက အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူပေါင်း များစွာကို ညဖက်မှာ အိမ်တံခါးခေါက် ဖမ်းခိုင်းပီး ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးစခန်းကို ပို့တဲ့ နေရာမှာ တော်တာလား
2 Feb 12, 07:52 AM
၅ (ည): မင်းတို့ တအုပ်သာ မမြင်ဖူး မူးမြစ်ထင်ပီး ခင်ညွန့်ကို အဟုတ်မှတ်နေတာ
2 Feb 12, 07:51 AM
၅ (ည): တကယ်က နိုင်ငံရေးမှာရော၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရော ခင်ညွန့်ထက် အများကြီး ပိုတတ်တဲ့ မင်းတို့ မကြားဖူးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ငါတို့ဖက်မှာ အများကြီး ရှိသေးတယ်
2 Feb 12, 07:47 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့်နေရာမှာ ဒေါ်စုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုရင် ဒီထက်မက အများကြီး ပိုပီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှမျှတတ ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်အောင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးနိုင်မှာ သေချာတယ်
2 Feb 12, 07:46 AM
၅ (ည): တိုင်းပြည်မှာ လူကြီးနေရာ ယူထားတဲ့ လူတွေမှာ ပုဂ်ဂိုစွဲ၊ ဒေသစွဲ မရှိရဘူး
2 Feb 12, 07:45 AM
၅ (ည): ပီးတော့ ခင်ညွန့် နယ်ထက် ပိုပီး ဦးစားပေးပီး အရေးပေါ် လုပ်ပေးရမဲ့၊ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ နယ်တွေ အများကြီး ရှိနေတာကို ခင်ညွန့်က ဒေသစွဲနဲ့ သူ့နယ်ကိုပဲ ရွေးပီး လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာကိုက လုံးဝ လွဲနေပီ
2 Feb 12, 07:44 AM
၅ (ည): မြန်မာပြည်မှာ လူ သန်း ၆၀ ကျော် ရှိတာ ခင်ညွန့် နယ်က လူပေါင်း သောင်းဂဏန်းလေးလောက်အတွက် ကွက်ပီး လုပ်ပေးတာ ဘာမှ စာဖွဲ့ မနေနဲ့
၅ (ည): ခင်ညွန့်လက်ထဲမှာ ပြည်သူ့ငွေတွေ လိုရာသုံးလို့ ရနေတာကို ဒီလို တဆွေဝ၊ တနယ်လှ လောက်ပဲ လုပ်ပေးတာက အရမ်း အရမ်းကို နည်းလွန်းတယ်
2 Feb 12, 07:37 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့်က သူ့နယ်သားတွေ အတွက် ဟိုဟာဒီဟာလေး လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာကကော ဘာထူးဆန်းသလဲ
2 Feb 12, 07:35 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့်က သူ့အမျိုးတွေ၊ သူ့လူတွေအတွက် အဲဒီလို ခိုးကွက်၊ ဝါးကွက်တွေ ထွင်ပေးတာက တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးတာပဲ
2 Feb 12, 07:32 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့်က သူ့အမျိုးတွေရယ်၊ ရင်းနှီးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေရယ်ကို စားလို့၊ ဝါးလို့ ရတဲ့ ရာထူးတွေ ရအောင် လုပ်ပေးတယ်
2 Feb 12, 07:24 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့် မကောင်းတာတွေ ရေးထားတာက လိုတောင် အများကြီး လိုနေသေးတယ်
February 2, 2012 at 9:44 AM Reply
ဒီအောက်က C-Box မှတ်ချက်တွေနဲ့ အပေါ်က မှတ်ချက်က C-Box မှာ လွမ်းသူနဲ့ ၅ (ည) နှစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပြီး ဒီပို့စ်နဲ့ဆိုင်နေလို့ ဒီမှာထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ C-Box တခုလုံး ဒီမှတ်ချက်တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေလို့ C-Box မှာ ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ လွမ်းသူရေးတဲ့ ရိုင်းတာတခုပါတာကိုတော့ ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တခါ မှတ်ချက်ရေးရင် အပေါ်က Message ကိုအရင်ဖတ်ပြီးမှ ရေးစေလိုပါတယ်။ သူများအိမ်လာလည်ရင် သူများစည်းကမ်းလိုက်နာရမယ်ဆိုတာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို နားလည်သူတိုင်း သိပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို နားလည်သူတွေရဲ့ မှတ်ချက်ကိုပဲ လက်ခံပါတယ်။ စည်းမရှိ၊ ကမ်းမရှိ၊ အခြေအမြစ်မရှိ ပေါက်လွတ်ပဲစား ရေးတာ ဘယ်သူ့မှတ်ချက်မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မ ဒီပို့စ်မှာ လွမ်းသူထင်သလို ဦးခင်ညွန့်အကြောင်း မကောင်းကြောင်းဘာမှ ရေးထားတာ မရှိဘူး။ သူ့ကြောင့်သူများခံရတာနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ခံရဖူးတာကို သူများတင်ထားတဲ့နေရာက ပြန်လည်ကူးယူပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် ကျွန်မ ခံစားရတဲ့ ကိုမွန်းအောင်ရဲ့သီချင်းနဲ့ ဖြည့်စွက်ပြီး တင်ထားပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို ကျွန်မဘာမှ မှတ်ချက်ပေးထားတာ မရှိဘူး။ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက် (Fact) တွေကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြထားတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မက ဦးခင်ညွန့်အကြောင်း မကောင်းကြောင်း ရေးထားတယ်ထင်ရင် ဘယ်အချက်လဲဆိုတာ တိတိကျကျ ထောက်ပြပါ။ ဒါဟာ လွမ်းသူအတွက် ကျွန်မရဲ့ အကြောင်းပြန်ချက်ပါ။
2 Feb 12, 07:23 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့်အကြောင်း ဘလော့ရှင် မငယ်နိုင် ရေးထားတာတွေ အားလုံး အမှန်တွေချည်းပဲ
၅ (ည): အရင်ကလို ထောက်လှမ်းရေးခေတ် ကောင်းတုန်းကလို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ ရမယ် အထင်နဲ့ ခင်ညွန့်ကို ဖားယားမနေနဲ့
၅ (ည): ဟိတ်ကောင် ... မင်း သိထားဖို့က ခင်ညွန့် ထောက်လှမ်းရေးခေတ်က မြောင်းပုပ်ရေနဲ့ မျောပါသွားပီ
2 Feb 12, 07:20 AM
Nge Naing: လွမ်းသူ မကျေနပ်တာ ရှိရင် ပို့စ်အောက်မှာ အချက်အလက်ထောက်ပြပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆွေးနွေးပါ။ ဆဲတာ ခြိမ်းချောက်တာ စတဲ့ Assault ဖြစ်စေတာတွေ မပါစေနဲ့။ အကုန်ဖျက်မယ်။ ပြောမရရင် IP ကိုဘန်းမယ်။
2 Feb 12, 07:16 AM
၅ (ည): ခင်ညွန့် ကျွန်က ပြည်သူ အယောင်ဆောင်ပီး အရူးစကားတွေ လာရေးနေလိုက်သေးတယ်
2 Feb 12, 07:14 AM
၅ (ည): မင်းပထွေး ခင်ညွန့် လဲ ကြိုက်တဲ့ တိုင်းပြည် လာခိုင်းလိုက်
၅ (ည): မပြောခင် မင်း လိုရာ ဆုတောင်းထား
၅ (ည): ဟိတ်ကောင် ... ခင်ညွန့် ကျွန် ... ဒီ အရူးစကားတွေကို ငါတို့ရှေ့မှာ လာပြော
2 Feb 12, 12:29 AM
kaiserhein: အဆွေတော် ကေအန်ယူ ပါတီဝင်များနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင် သို့ ကမ်းလှမ်းချက် [link]
2 Feb 12, 12:09 AM
လွမ်းသူ: ငါတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဦးခင်ညွှန့် ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြီး မရေးပါနှင့် ငါတို့တွေ နင်နှင့် နီးရင် စွဲထိုးမိလိမ့်မယ်.. တစ်ရက်ကျရင် ငါတို့ သြစတြေးလျှကို ရောက်လာဦးမယ် အဲဒီချိန်မရောက်ခင် နင် ထမင်းဝအောင် စားထား.
2 Feb 12, 12:02 AM
လွမ်းသူ: တောင်ယာ ခုတ်နေကျတယ်။ သူတို့တွေကို ငါ အရမ်းသနားတယ်။ ဦးခင်ညွှန့်တာ ကျောင်းဆောက်မပေးခဲ့ရင် ငါတို့လဲ ရေငန်သောက်နေရမှာဘဲ.. နောင်လူတွေလဲ တောင်ယာခုတ်နေရမှာဘဲ အခုတော့ မလိုတော့ဘူး
2 Feb 12, 12:01 AM
လွမ်းသူ: ဦးခင်ညွှန့် စီမံပေးခဲ့လိ်ု့ ... ငါ တို့တွေ အလွယ်တကူ ပညာသင်ခဲ့လို့ရတလယ် .. ငါ တို့တွေ ဘွဲ့တွေရခဲ့တယ်.. ဟို အရင်ကလူတွေ လမ်းခရီးခက်ခဲရှိလို့.. လေး ငါး ရှစ်တန်းနှင့် ရေ ငန်သောက်၊ မြှစ်ခြောက်စား ပြီး
February 2, 2012 at 9:53 AM Reply
2 Feb 12, 08:39 AM
၅ (ည): တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှတင် မက အာရှမှာပါ အတိုးတက်ဆုံး၊ အဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံး စာရင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်ကြီးဟာ အခု ကဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး၊ ကဘာ့ ဘာဘ်အစားဆုံး၊ လူ့အခွင့်အရေး အချိုးဖောက်ဆုံး စာရင်းဝင်သွားတာ ကြာနေပီ
2 Feb 12, 08:35 AM
၅ (ည): ရွှေပြည်ကြီးကကော ဘာဖြစ်သွားသလဲ
2 Feb 12, 08:34 AM
၅ (ည): ဆန်ကောထဲမှာ ထည့်ပီး အလှိမ့်ခံရတဲ့ ဆီးဖြူသီးတွေလို ဖြစ်သွားတော့တာပဲ
၅ (ည): ဒီလို ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်၊ ငါ့မြင်းငါစိုင်း၊ စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် အနေအထားနဲ့ စစ်အာဏာရှင်က ထင်ရာစိုင်းပီး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝဟာ ဆန်ကောထဲမှာ ထည့်ပီး အလှိမ့်ခံရတဲ့ ဆီးဖြူသီးတွေလ
2 Feb 12, 08:31 AM
၅ (ည): စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက လုပ်တာကိုင်တာ သုံးစားမရအောင် ညံ့ဖျင်းတာတွေ၊ ပြည်သူ့ငွေတွေကို ဒေါ်လာ သန်း ထောင်နဲ့ချီပီး အပြိုင်အဆိုင် ခိုးနေတာတွေကို ပြည်သူတွေက ဘာမှ မဝေဖန်ရဲ၊ မထောက်ပြရဲတော့တဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်သွားတာပေါ့
2 Feb 12, 08:25 AM
၅ (ည): တိုင်းပြည်မှာ အာဏာရှင်နဲ့ အပေါင်းပါတွေသာမက အောက်ဆုံးအဆင့်က လက်ပါးစေတွေကပါ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဥပဒေမဲ့ အနိုင်ကျင့်နေတာတွေ၊ မတရား လုပ်နေတာတွေကို ပြည်သူတွေက မတိုင်ရဲတော့ဘဲ ငြိမ်ခံနေရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်သွားတာပေါ့
January 1, 2014 at 5:05 AM Reply